Midowga Afrika oo beeniyey eeddii Xildhibaannada ee ahaa iney AMISOM xirtay Roobow – Kalfadhi
Midowga Afrika oo beeniyey eeddii Xildhibaannada ee ahaa iney AMISOM xirtay Roobow
Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna Madaxa AMISOM, Ambaasadoor Fransisco Madeira, ayaa diidmo uga jawaabay eedeyn uga timid Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka. Waxa uu AMISOM ka fogeeyey iney ku lug lahaayeen soo qabashada, xariga iyo Xamar u soo taxaabidda Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) xoriyaddiisa ka qaadday, isagoo u ah Musharrax, loona ogolaaday inuu ka qeyb-galo Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS).
Fransisco Madeira waxa uu beeniyey in dhammaan eedeymaha ay u jeediyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka ay run yihiin. Warqad laga soo saaray Ururka Midowga Afrika ayaa lagu yiri “AMISOM waxay joogteyn doontaa, aqoonsan doontaana xushmeynta dadka Soomaaliya iyo Dowladda Soomaaliya, waxaana ka ahaan doonnaa dhex-dhexaad iney qabsato waajibaadkeeda”. Madeira waxa uu Soomaalida ugu baaqay iney xalistaan arrimaha adag ee ka taagan dalkooda. “Waxaan ugu baaqayaa iney xaliyaan arrimaha xiriirka la leh xaaladaha taagan ee doorashada ka soo fool leh Koofur Galbeed Soomaaliya” ayuu yiri Fransisco Madeira.
Waxa uu sheegay ineysan AMISOM marnaba soo fara-galin doonin, oo ay xiriir wada shaqeeneyd la lahaan doonto Dowladda Soomaaliya. “Waxaan xushmad sare u haynaa shuruucdooda, dhaqankooda iyo qiyamkooda” ayuu yiri Ambaasadoorku Fransisco Madeira. Waxa uu ka tacsiyeeyey dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay xasaradda ka oogantay magaalada Baydhaba doraad.
Mukhtaar Roobow waxaa wararkii ugu horreeyey ee xarigiisa laga helay ay sheegayeen iney Ciidanka Itoobiya ee ilaaliya Madaxtooyada KGS qabteen, gacmahana ka xireen, iyadoo ay wararka qaarna sheegayeen iney jir dileen. Ciidankaas waxay, Itoobiyaan ha ahaadaanee, ka tirsan yihiin AMISOM. Isla iyaga ayaa wararka laga helayey Baydhaba sheegayeen iney gacan ku lahaayeen keenista Roobow ee Muqdisho. Hase ahaatee, Dowladdu waxay horay u sheegatay iney hawshaas iyadu qabsatay.
Hoos ka aqriso warqadda Midowga Afrika ee sheekada kore, haddii aad taqaan Afka Ingiriiska.
Baaqashada Kulamada Golaha Shacabka oo fadhiid ka dhigeysa shaqada dowladda
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku baaqay in Doorashada KGS dib loo dhigo